Zimkhalele owesifazane ofonele i-Ex kaningi | News24
Zimkhalele owesifazane ofonele i-Ex kaningi
Delaware - Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela owesifazane oneminyaka engu-19 ubudala waseFelton ngemuva kokuba amaphoyisa athi ushayele owayesoka ucingo izikhawu ezingaphezu kwezingu-300 ngosuku olulodwa.
Amaphepha asenkantolo atholwe ngabezindaba iNews Journal aveza ukuthi uKourtney R. Furber ulandelane nendoda eyayiyisoka lakhe eneminyaka engu-18 ubudala eMilford ethi akabambe ucingo, ebe emfonela ephindelela.
OLUNYE UDABA: Ushonile umfana ozidubule ngephutha eshutha i-selfie
Amaphoyisa ashayelwe ucingo yindoda ibika ngoFurber obelokhu emshayela ucingo ngomhlaka-18 Ephreli, kusho uSergeant Dwight Young.
Le ndoda ithe isihayelwe ucingo izikhawu ezingaphezu kwezingu-300 kodwa yaqhubeka nokuziziba izingcingo ezingenayo.
UFurber ube eseyishayela ocingweni lwasemsebenzini, emhlupha emsebenzini waze waluvala ucingo, ngokusho kwamaphepha asenkantolo.
UFurber wake watshela le ndoda ukuthi: "Uma ungakwazi ukuba nami angeke ukwazi ukuba nezingane zakho."
Le ndoda iphinde yabika ukuthi uFurber wake wazama ukumshayisa nangemoto emsabisa ngokuphiliza amawindi emoto yakhe nokuqhumisa amathayi emoto.
UFurber uthweswe ngecala lokuhlukumeza wase ededelwa ngemali yebheyili engu-$1,000, kubika i-Delawareonline.